UTELCO: Matihanina kokoa ny sary alaina amin’ny finday P10 sy P10 plus | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE UTELCO: Matihanina kokoa ny sary alaina amin’ny finday P10 sy P10 plus
UTELCO: Matihanina kokoa ny sary alaina amin’ny finday P10 sy P10 plus
By Nirinajuil 01, 2017, 07:04 0
Finday hiaka farany novokariny ny HUAWEI ny “smartphones” P10 sy P10+. Ho an’ireo tia maka sary amin’ny finday raitra tahaka azy, mitovy amin’ireny fakan-tsary matihanina ireny mihitsy rehefa maka sary amin’izy ireo. “Natao roa ny “objectif” fangalana sary. Ho fanatsarana ny sary azo no antony nanaovana izany”, hoy i Joël L’Etourdi, tomponandraiktra ao amin’ny mpaninjara ny vokatra HUAWEI eto Madagasikara, UTELCO.
Tsara foana ny sary azo avy amin’ny P10 sy P10+ na dia tsy ampy aza ny hazavana ilaina. Ankoatra izany, tahaka ny “studio” atao anaty paosy ireny ny fananana P10 sy P10+. Nambaran’ny Vinesh Eranah, tomponandraikitra ao amin’ny UTELCO fa misy « application” manatsara sy manazava ny sary tiana alaina.
Karazany maro ny lokon’ireto finday hiaka farany an’ny HUAWEI ireto. Misy loko maitso, volamena, volafotsy…
Miezaka manome tolotra mamaly ny filan’ny mpanjifa ny orinasa HUAWEI. Tsy atahorana hipoaka ny « batterie ». Mora fahanana ihany koa satria telopolo minitra eo dia voafahana hatrany amin’ny 58% ity farany.
Anisany antony ampiasana finday ny “internet”. Efa namboarina ho 4,5 G ny tanjaky ny connexion ny P10 sy P10+ na dia mbola tsy misy eto Madagasikara aza io maridrefy. Manome antoka ho an’ny mpanjifa noho izany ny ny tomponandraikitry ny UTELCO fa matanjaka tsara ny “connexion” raha mampiasa ireo finday vaovao ireo.
Manomboka amin’ny herinandro ambony, azo jifaina eto Madagasikara ny finday hiaka farany P10 sy P10+ marika HUAWEI.
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-1.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-1.jpg »] HUAWEI P 10 PLUS [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-2.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-2.jpg »] HUAWEI P 10 PLUS [/image_slider]]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-3.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-3.jpg »] HUAWEI P 10 PLUS [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-4.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-4.jpg »] HUAWEI P 10 PLUS [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-5.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/HUAWEI-P-10-PLUS-5.jpg »] HUAWEI P 10 PLUS [/image_slider]
Previous PostFI.DM.TAM: Nilatsaka an-tsitrapo nanome ra Next PostSENDIKA INDOSTRIA: Mibaby fatiantoka noho fitokonan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana.